जान्नुहोस् ! यस्ता छन् फर्सी खानुका फाइदाहरु
अप्रील 28, 2019 अप्रील 28, 2019 साइन्स इन्फोटेक3Comments डा. राम बहादुर बोहरा, फर्सी, फाइदाहरु
हामीले फर्सीलाई तरकारीको रूपमा खाने गरेका छौं । यो स्वास्थ्यमा राम्रो फाइदा गर्ने कुरा पत्ता लागेको छ । फर्सीमा भिटामिनको मात्रा निकै बढी पाइने भएकाले यसको तरकारी समय समयमा खाने गर्नु राम्रो हो । हाम्रो करेसाबारीमा उत्पादन गर्न सकिने फर्सीमा पाईने पौष्टिक तत्व हरेक २५० ग्राम फर्सीमा ४९ क्यालोरी पाइन्छ ।
फर्सीमा कार्बोहाइड्रेटको मात्रा निकै कम हुन्छ भने यसले शरिरमा रहेको कोलस्टेरोलको मात्रालाई समेत कम गर्ने काम गर्दछ । हाम्रो गाउघरमा फर्सी उसीनेर खाने चलन पनि छ । यसरी खानाले यसको फाइदा अझ बढ्न सक्ने कुरा केहीको मत छ । चाहे जे होस् प्रकृतिको अनुपम उपहारलाई हामीले प्रयोग गरेर लाभ उठाउन सके स्वास्थ्यमा ठूलो फट्को मार्नेछ ।
फर्सीको अन्य फाइदाहरु
१. फर्सी बियाँ पनि उत्तिकै फाइदाजनक हुन्छ । यसको बियाँबाट मनग्गे मात्रामा प्रोटिन, भिटामिन, फ्याटि एसिडहरू पाइन्छ । यसले शरिरमा चाहिने पौष्टिक पदार्थको आवश्यकतालाई पुरा गर्न समेत मद्धत गर्छ ।
२. फर्सीमा फाइबर, भिटामिन ए, सी र ई तथा अन्य पौष्टिक पदार्थ पनि यसमा पाइन्छ । जसले हाम्रो स्मरण क्षमताको विकास गर्नुका साथै रेडिकलहरू लड्नका लागी समेत मद्धत गर्छ ।
३. पहेलो भएर पाकेको फर्सी झन् फाइदाजनक हुन्छ । यसमा हुने बेटा क्यारोटिन, एन्टिअक्सिडेन्टले हाम्रो शरिरमा क्यान्सरको सम्भावनालाई समेत कम गर्छ भने मुटु रोगमा समेत फाइदा गर्छ ।
← महिनावारी हुँदा तल्लो पेट दुख्ने समस्या र यसको उपचार
गालाको रंगबाट थाहा हुन्छ स्त्रीको चरित्र →
जनवरी 28, 2019 फ्रेवुअरी 21, 2020 साइन्स इन्फोटेक 0
3 thoughts on “फर्सी खानुका फाइदाहरु”
Pingback: जान्नुहोस् ! यस्ता छन् जामुन खानुका फाइदाहरु